Free download (Nditsigirei kune mamwe mabasa) mune tsanangudzo yakakwirira.
Kuti andione paYouTube bvuma.
EMBA spol. S Ro iri kambani yeCzech iri pamuganhu pakati peGiant Mountains uye Jizera Mountains. Kutanga kwenyaya cardboard Paseky nad Jizerou kusvikira gore 1882, kana paiva Rösslerovými hama nheyo fekitari kuti dzakaitwa nemaoko chena makadhibhokisi kavha zvigadzirwa kuti girazi indasitiri muna Jablonec mudunhu. Nokuti wose akatevera Danho oupenyu hwokuratidza kuwedzera chekambani kugadzirwa chirongwa uye kugadzirwa nzvimbo.
Zviitiko zvakakosha munhoroondo yechitoro chepasitori zvinonyanya kuiswa kwezvakashandura makadhi makadhi muZ1970 nemakore 1989, izvo zvakaguma nekuwedzera kukuru mukugadzirwa kwemhando. Mumakore makumi mapfumbamwe emakore makumi maviri, pasi pekambani yeEEMBA, kusimbiswa kwezvinyorwa zvekuchengetedza zvinyorwa zvekuchengetedza zvakakwana zvemabhuku ebhizimisi uye zvinyorwa zvematsika uye zvechiitiko zvinokosha zvakatanga. Mune mireniyamu mitsva, chikwata chekugadzira chikafu chakakonzerwa nemiganhu yekugadzirwa kwehofisi yezvipfeko zvinyorwa.
Isu tinoziva nhaka yezvizvarwa zvakapfuura, izvo zvakatitungamirira kusvikira nhasi uye kuzvipira kwedu pakubudirira kusimbisa basa rave ratanga. Sechikamu chekuedza nguva dzose kuti tive nhanho imwe mberi kwevakwikwidzana vedu, tinoisa kusimbisa pamhando yehutano uye ukama hwevatengi.
Unyanzvi hwedu hwehutano uye vashandi vedu vane ruzivo rwakareba kwenguva refu vimbiso yepamusoro-soro yebasa. Hatitengi kutengesa zvigadzirwa, asi tinopa mhinduro dzakakwana kuvashambadzi munyika dzinopfuura 30 pasi rose.
EMBA ikambani yeSczech ine tsika yakareba uye nzira inoshandiswa kune vanhu uye inharaunda. Zvigadzirwa zvayo zvinokonzerwa nekugadzira pepa uye zvakanyatsoshandiswa zvakare. Kuburikidza nemishonga yayo EMBA, inobatsirawo kuchengetedza nekuchengetedza tsika netsika dzezvakaitika munyika dzakawanda. Sezvo mukuru wenharaunda yevashandi, iye ane mhosva yekuvandudza mamiriro ezvinhu akasimba uye akachengetedzeka evashandi vake, pamwe nekuzvipira kugovera kuhukama hwehukama hwemunharaunda yacho yose.
Paseky nad Jizerou iri musha wemakomo mudunhu reSemily, munzvimbo yeRiberec, kumadokero kweGiant Mountains, pamuganhu weGizera Mountains, kurutivi rworudyi rwe Jizera Mine. 252 vagari vanogara pano; dzimba dzakawanda dzimba nedzimwe zvivako zvinoshumira nhasi kwezororo rekugara. Kurutivi rwokumaodzanyemba komuguta ndeyeKrkonoše National Park, chikamu chekumaodzanyemba kusanganisira misha mikuru kusvika ku Jizera Mountains Protected Landscape Area.
Kutanga kutaurwa kwekutanga kwemusha kunobva ku1713.
Musha wacho ungangodaro wakavakwa mu16. Zvisinei, yekutanga yekodhi inobva ku1654. Chikamu chekare kupfuura zvose chaiva Makov, apo magirazi akanga aripo panguva iyoyo, uye Havírna, uko sirivha yaive yakafuridzirwa. Sezvo nguva yaifamba, masango akanga achidzoka achikomberedza mabasa evanhu, uye zvitsva zvitsva zvakaonekwa mumitsva mitsva, avo vagari vayo vakanga vari, chaizvoizvo, vanocheka. Matombo anobva munzvimbo dzaiva mumatanda anoiswa mumirwi yakawanda yemazuva ano.
In 1789 chechi yakavakirwa gore 1791 aiva Pasekách akatanga kugara dzidzo. Yomunharaunda chikoro akadzidzisa vamutsidziri yenyika, Cantor naJosef Simunek uye mubatsiri wake Věnceslav Metelka akava mupfumi initiators mimhanzi, mafirimu, mabhuku, uye mukuru upenyu tsika musha. Věnceslav Metelka somunhu autodidact yakadzidziswa gitare muiti uye akavamba yemadzitateguru gitare rokuita tsika, umo yakabuda inonzi Giant gitare kuchikoro, asi kurarama munyika genera Pilar Špidlen uye Vedral. Pashure peHondo Yenyika II panguva vakagarwa mimhanzi tsika Pasecký gitare mudzidzisi František Vedral, asi mukupera mashanu bhendi uye mudzidzi mitambo anyangarika. Muna 1970s 20. yezana remakore rakashanda mumusha uye chechi yeSt. Vaclav Pater MUDr. Ladislav Kubíček. In 1980 yakavambwa neChechi St Wenceslas choral Society kwaya, iyo yava pamusoro 30 nhengo kubvira 1990 Paseky pagore anoronga mumhanzi mitambo; kwaya Choir Kuitwa musicians vainyanya nyanzvi.
Musha ndiwo mamiriro echokwadi chinyorwa naKarel Vaclav Bvisa Zapadlí vlastenci. Sangano rake rakagadzirirwa mu 40. famba 19. muzana remakore, uye Paseky anonzi Pozdětin, Mutungamiri anotora mheyo dzeMetel's memory, basa rinokosha revanhu vemimhanzi.
Kubudirira kukuru kwaiva Paseky mu 1869, apo 212 yakanyoreswa pano nenhamba dzinotsanangura uye 1710 vagari. Zvadaro nyika yacho yakadzika zvishoma nezvishoma. Pasinei nokuti misha yePasek yaiva yeCzech chete, Chibvumirano cheMunich chakabatanidzwa kuGermany sechikamu che Sudetenland. Kunyangwe apo vagari vePasek vasina kubata zvakananga mushure mekudzingwa kwehondo kwevaJalimane, kwaive nekuderera kukuru kwehupenyu hwechigarire uye vazhinji vezvivako zvakatengwa nevatori vezororo. Nharaunda mukuchengetedzwa kwepurazi yehurumende dzakakanganiswa nemichina yakakura, imwe neimwe inoregererwa. Muna 1979, chikoro chacho chakaregererwa muPaseky.
Manicalis centre: nzvimbo yekutoro yakasara uye penheji Na Buďárce, post office uye ehofisi. Kuruboshwe ndicho Chirangaridzo cheZapadly Patriots muimbova kereke, mushure meSt. Wenceslas Church.
Sokol Gymnastics Club yakatangwa Pasekách 1896. Mumakore 1936-1938 aiva družebního ari Muduku akavaka Sokol Sokol, uyo pashure pehondo rakava tsika muzinda womunharaunda. Musango pana Sokol Hall yakavakwa uye yepanyama yemitambo. Mugumo mabasa aiva okutanga nookupedzisira shanduro nevhiki mumhanzi uye mitambo mutambo Paseckého 1952, pashure utongi hwechiKomonisiti mabasa Sokol akamira uye paiva vakawanda kuderera munharaunda upenyu. Sokol akapisa muna 1967 apo munda uto Czechoslovak. Pari (2008) iri munharaunda TJ Sokol pamusoro 100 nhengo uye anobata zvemitambo, mimhanzi uye tourism, mabasa, vakaronga zvevana misasa muzhizha, vanotora chikamu kuchenesa musha uye zvichingodaro.
Kubvira ku1888 muPaseky, pane zvakare yakave yakazvipira moto. Munguva yakapfuura, vashandi vemoto vemo vanogadzira mabhora uye vakatamba mifananidzo yemitambo muBu Soupupu, gare gare paHowlairs Inn. Muna 1931, gavhuna yemoto yakaita choir yakasiyana kubva kuHairna.
Mukuwedzera, kubvira pagore re2010, sangano rehurumende Paseky kunze kunze rinoshanda mumusha, iro rinoronga mitambo yemunharaunda nemitambo.
Kubvira ku1976 kusvika ku1990, Paseka yakanga isiri guta rakasiyana asi chikamu chayo Rokytnice. Muna 1991, Paseky akanyorera kuRural Reclamation Program uye pasi pegurogiramu iyi Territorial Plan yeDhipatimendi Rekugara Paseky nad Jizerou.
Mutaundi kune miti yehuni FUKNER sro, mugadziri wemakadhibhodhi uye kadhibhodhi pakatengesa EMBA sro uye makwai epurazi Zvonice.
Nhoroondo yemunharaunda yacho yakatsaurirwa kuMusamende weZapadly patriots mune imwe yekereke yeparende, pedyo neChechi yeSt. Wenceslas uye inotarisana neresitorendi Na Buďárce. Imyuziyamu inopiwa kune basa re violinist uye munyori Věnceslav Metelka uye munyori Karl Vaclav Rais, hupenyu hwezvikomo zvepanyika mu19. yezana remakore, violin nekucheka. Chirangaridzo chakasimbiswa muC1958 mumakamuri epasi repasi, gore re1975 rakavakwazve maererano nemamiriro ezvinhu eFDr. Jaromir Jech, nyanzvi uye muparidzi wemabasa aMetel. 1978 yakawedzerwa kusvika kumusoro. Imyuziyamu ikozvino iri pasi pekutungamirirwa kweKronoono National Park.
Musha wacho wakagadzirwa nemisha mishoma uye mimwe makomo emakomo akapararira pamatope. Zvose izvi zvinosanganisira imwe nzvimbo. Izvo zvinyorwa zvekugadzirisa zvikwereti zvinowanikwa pasi pamasisita matatu: Paseky nad Jizerou, Havírna naMakov. Havírna wonamatidza kugarwa mumupata Havírenského achamhanyira rwezasi pamusoro Hromovka rwokumusoro pamusoro Mechovice (803 m), uye chinosanganisira dzinogarwa nzvimbo sezvo chikomo, Piave, Lomička, nokuomesa etc. Makov iri kugarwa kumaodzanyemba chikamu Municipality mumupata Makovského potoka. Northwest chikamu muguta, pamwe vanoverengeka state anosimudza uye neyemitenusirwa, akadana Hořensko, boka dzimba kurutivi rwokumabvazuva pechikomo Javorníka (822 m) anonzi Tomšová. Kana mugwagwa pedyo Tomšová anomira mumwe bhawa yekare kana pamusoro marozari Prdku. The musha kunosanganisira chisango nzvimbo (kunyanya spruce masango) kuchamhembe remigodhi, nezvikomo Hromovka (916 m) White Rock (pedyo pamusoro 957 m, nzvimbo mumusha anopa 964 m) uye Kapradník (910 m) uye ugari Vakatorwa muChizera Valley. Nzvimbo yakadzika pasi pemusha ndeye Jizera, 476 m
The musha uri pedyo kumavirira pamwe makanzuru Zlata Olesnice uye mudzi (k. U. Rejdice, Dul uye Polubný) kuchamhembe kwakadziva kumadokero munzvimbo yeguta Jizerou Harrachov, kumabvazuva pamwe munharaunda Jizerou Rokytnice (Dolní Rokytnice), kumaodzanyemba pamwe nenharaunda yeguta reVysoké nad Jizerou (pedyo neSiklenařice) neguta racho Jablonec nad Jizerou.
4Karchivingarchivboxdji mavicdrone the manodrone the manoEMBAEMBA spol. S Rowakatsetseka kabhodhiJizerkyMountains GiantKrkonošekvadroptérafunicularkabhodhiLysa porSkiingmavicparkingparking panzvimboclearingsPaseky nad Jizerouphantomphantom 3phantom 4PolandbhaindaRokytnicethe dzisinaskipaspokugaraVilémovkwevakugadzirwa kabhodhikubva kumusoro
nyora mhinduro kukanzura mhinduro